Warshadaha gawaarida | RayHaber | raillynews
Duulista iyo nidaamka nidaamyada tareenka ee Eskişehir waxay la wadaageen kooxaha adduunka ee Spain. Baaxadda mashruuca Eskişehir Rugta Wershadaha (ESO) oo ay taageerto Midowga Yurub, soosaarayaasha Eskişehir ayaa la kulmi doona barnaamijka wafdiga ganacsiga. [More ...]
Suuqa gacanta labaad, oo kor u kacay ka dib markii ay hoos u dhacday iibinta gawaarida eber ee qaybta gawaarida, ayaa sidoo kale gacan ka geysanaysa ballaarinta waaxda khibradda. Shaki kuma jiro in muwaadinku iibsan doono gaariga gacan labaad uu iibsan karo oo si badbaado leh u iibin karo. [More ...]
mid ka mid ah mashruuca ugu muhiimsan Turkiga ee qaranka "100 Boqolkiiba Domestic Car" la soo bandhigay by Mr. Madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta ka qayb. Xayeysiinta dooxada IT ee Gebze; wasiiro, agaasimeyaal sare iyo ganacsato [More ...]
Automotive Sector Hogaamiyaha, KPMG Turkey Hakan Ölekl Turkiga, ayaa sheegay in dadka deegaanka u timid inaad waddo cusub ee fulinta mashruuca gaari ah. Teknoolojiyadda ayaa hal dhinac u rogi doonta qaybta baabuurta isla markaana safarka magaalooyinka caqliga leh ayaa bilaaban doona. [More ...]
Ziraat Bank, Halkbank iyo Vakıfbank ku dhawaaqay bishii September by 26 ku hawlan soo saarta noocyada baabuurta la iskaashi gaar ah wax soo saarka gudaha qabtay waaxda baabuurta ee Turkey, waxaa sii balaarineysa la mid noqoshada ee shirkadaha cusub. [More ...]
Hook TAYSAD Guddoomiyaha Alper, Volkswagen waxay abuuri kartaa saamayn domino ka mid ah maalgelinta ee Turkey iyo shirkadaha kale ee dib loo gelin doonaa ayuu yiri. Volkswagen, oo ah mid ka mid ah shirkadaha wax soo saareyaasha ugu waaweeyn dunida, waa warshada cusub ee laga hadlay muddo bilooyin ah. [More ...]
kala duwan ee wax soo saarka leh awoodda wax soo saarka sidoo kale waxay kordhisaa kasta oo maalin maraya KARDEMİR, ayaa maanta lagu qabtay gariiradda ay qarada waaweyn oo-soo-saarka steel dalka Turkiga muddo 56 mm ugu horeysay dhexroor. Soosaaridda xarkaha qafiifka ah rubuc qarnigii hore ee sanadka [More ...]
Warshadaha Birta iyo Birta ee Karabük (KARDEMİR), oo ah baaxadda daraasadaha R&D ee shirkadaha ka shaqeeya waaxda baabuurta iyo tareenka ayaa sameeyay baaritaanno. KARDEMİR waxaa loo habeeyay inuu si hufan u maareeyo cilmi baarista iyo waxqabadka cusub ee wax soo saarka cusub. [More ...]